डरा विक्रेता | Martech Zone
बुधबार, जुन 19, 2019 बुधबार, जुन 19, 2019 Douglas Karr
यस हप्ता, म व्यापार मालिकसँग बसेँ जुन मैले केही परियोजनाहरूमा काम गरें। उहाँ धेरै प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ र बढ्दो व्यापार छ जुन राम्रो गर्दै छ। एक युवा सानो व्यवसायको रूपमा, उसले आफ्नो क्यालेन्डर र बजेट सावधानीपूर्वक सन्तुलनको साथ चुनौती दिएको छ।
उसको मुख्य संलग्नता थियो जुन एक नयाँ ग्राहकसँग योजना गरिएको थियो अप्रत्याशित ढिलाइ भयो। यसले उसको कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यलाई जोखिममा पार्छ किनभने उसले कामका लागि आवश्यक उपकरणमा केही लगानी गरेको थियो। ऊ कहिले पनि राजस्व विना नै होईन, तर उपकरणहरू भुक्तानको साथमा अडिनेछ भनेर उसले सोचेको पनि थिएन।
केही हप्ता पहिले, म उनको अवस्था बारे अनजान थिए। उसले आफ्नो साइटको बारेमा मेरो सल्लाह मागेको थियो किनकि यो राम्रो रूपान्तरण भएको थिएन र मैले उनलाई मार्फत हिंडे पेरियोड्स व्यायाम उनले सामग्रीमा काम गरे र छोटो भिडियो परिचय पनि विकास गर्न जाँदैछन्।
जब म यस हप्ता उनीसँग गएँ, उनले आफ्नो अवस्थाको बारेमा खुला पारे। मैले सोधेँ उनी यस बारे के गर्दै थिए। उनले भने कि तिनी साइटमा काम गर्दै थिए, एक भिडियोमा काम गर्दै थिए, र आफ्ना ग्राहकहरूलाई ईमेल अभियानमा काम गरिरहेका थिए।
तिनीहरूलाई कल गर्नुहोस्
मैले सोधें, "के तपाईंले आफ्नो ग्राहकलाई बोलाउनु भयो?"
"होईन, म यो ईमेल अभियान पठाएपछि म पछि लाग्ने छु।", उनले जवाफ दिए।
"अब तिनीहरूलाई कल गर्नुहोस्।", मैले जवाफ दिएँ।
“साँच्चै? म के भन्ने? ”, उसले सोध्यो ... निलो बाहिर बोलाउन चिन्तित।
“तिनीहरूलाई सत्य भन्नुहोस्। तिनीहरूलाई कल गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई थाहा दिनुहोस् कि तपाईंसँग अप्रत्याशित ग्राहकबाट बाहिरिने तपाईंको तालिकामा एक अन्तर छ। उनीहरूलाई थाहा दिनुहोस् कि तपाईंले उनीहरूसँग अघिल्लो संलग्नताहरूमा काम गर्न पाउँदा रमाईलो गर्नुभयो र त्यहाँ केही अवसरहरू छन् जुन तपाईं उनीहरूसँग काम गर्न देख्नुहुन्छ। ती अवसरहरूको बारेमा छलफल गर्न उनीहरूसँग व्यक्तिगत भेटको लागि सोध्नुहोस्। "
"म यहाँ एक घण्टामा बैठकको तयारी गर्दैछु, म पछि फोन गर्छु।"
"तपाईंको व्यवसाय समस्यामा छ र तपाईं बहाना बनाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईं आफ्नो बैठक अघि अहिले नै एक फोन कल गर्न सक्नुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ र म यो जान्दछु। ”
"म डराएको छु," उनले भने।
"तपाईको फोन कलदेखि डराउनु भएको छ जुन तपाईले गर्नु भएको छैन जब तपाईको व्यवसाय जोखिममा छ?" मैले सोधे।
"ल। म गर्दैछु। ”
करिब २० मिनेट पछि, मैले उनलाई कल कसरी भयो भनेर पठाउनु भयो। ऊ उत्साहित थियो ... उसले ग्राहकलाई बोलायो र तिनीहरू फेरि सँगै काम गर्ने अवसरको लागि खुला थिए। उनीहरूले यस हप्ता उनको कार्यालयमा एउटा अनुवर्ती बैठक सेट गरे।
माथिको मेरो सहकर्मी जस्तै, म आफ्ना ग्राहकहरूलाई सहयोग गर्नका लागि मेरो क्षमतामा विश्वस्त छु तर बिक्री र सम्झौता प्रक्रिया अझै त्यस्तो चीज हो जुन मैले रमाईलो गरिनँ… तर म यो गर्छु।
वर्षौं अघि, मेरो बिक्री कोच, म्याट नेटलटन, मलाई गाह्रो पाठ सिकायो। उसले मलाई उसको अगाडि फोन उठायो र ब्यापारको लागि सोध्छ। मैले त्यस कलबाट ठूलो सम्झौता पाएँ जुन मेरो स्काईक्रोकेट भयो मार्केटिंग परामर्श फर्म.
मलाई डिजिटल मिडिया मनपर्छ ... सामग्री, ईमेल, सोशल मिडिया, भिडियो, विज्ञापन ... यो सबैको लगानीमा ठूलो प्रतिफल छ ... भोलि। तर यो तपाईं एक सम्झौता बन्द गर्न गइरहेको छैन आज। तपाईं डिजिटल मिडिया मार्फत केहि अधिक विजेटहरू, टिकटहरू, र अन्य साना सम्झौताहरू बेच्न सक्षम हुनुहुनेछ। तर यदि तपाईंको फोन व्यक्तिगत रूपमा फोन वा व्यक्ति मार्फत एक संभावना संग जडान छैन, तपाईं ठूलो व्यापार बन्द गर्न जाँदै हुनुहुन्छ तपाईंको व्यापार आवश्यकताहरू सम्झौता।
केही महिना अघि म पनि त्यस्तै अवस्थामा थिएँ। मसँग एक प्रमुख ग्राहक थियो कि उनीहरूले मलाई सूचना दिए कि उनीहरूले रकम गुमाउने छन् र हामीले हाम्रो बजेटलाई घटाउनु पर्ने थियो। म कुनै पनि प्रकारको आर्थिक समस्यामा थिइनँ ... र मसँग कम्पनीहरूको सूचि छ जुन मसँग पहिले नै सम्पर्कमा रहेको सहयोग खोज्दै थिए। तर नयाँ ग्राहकहरु र्याम्प अप गर्न कठिन छन्, संग सम्बन्ध बनाउन कडा छ र लगानी मा सबै भन्दा राम्रो प्रतिफल छैन। नयाँ क्लाइन्ट प्राप्त गर्नु भनेको मैले आशा गरेको कुरा थिएन।
एक विकल्पको रूपमा, मैले मेरा हालका ग्राहकहरूसँग भेटें र राजस्वको भिन्नताको बारेमा इमानदार थिएँ जुन मैले आशा गरेको छु। हप्ता भित्रमा मैले एउटा प्रमुख ग्राहकसँग सम्झौता नवगर्मा गरेँ र अर्को ग्राहकबाट अर्को स offer्ग्रहको स offer्लग्नता विस्तार गर्न प्रस्ताव गरेको थिएँ। मैले लिएका ती सबै कुरा मैले व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूसँग कुराकानी गरिरहेको थिएँ, उनीहरूलाई परिस्थिति थाहा दिनको लागि, र उनीहरूसँग टेबुलमा समाधान राख्दै थिए।
यो ईमेल, भिडियो, सामाजिक अपडेट, वा एक विज्ञापन थिएन। यो एक फोन कल वा प्रत्येक संग एक बैठक ले यो भयो।
तीन हड्तालहरू ... अर्को
यसमा एउटा अनुवर्ती। तपाईको सबै समय लगानीमा सावधानी अपनाउनु पर्छ जुन सम्भावनामा कहिल्यै नजिक नहुन सक्छ। तपाईं उत्पादन मा बिक्री को समय को एक जबरजस्त राशि खर्च गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाइँसँग ग्राहक वा सम्भावना संग व्यक्तिगत सम्बन्ध छ - यो अझ खराब हुन सक्दछ। उनीहरू तपाइँलाई मन पराउँछन् र तपाइँ संग व्यापार गर्न चाहान्छन्, तर तिनीहरू सक्षम हुन सक्दैनन्। यो समय, बजेट, वा अन्य कुनै कारणहरू हुन सक्छ। तिनीहरू वास्तवमै धेरै राम्रो छन् तपाईंलाई थाहा दिन यो घट्ने छैन। तपाईं के गर्न चाहानुहुन्छ अन्तिम कुरा उनीहरूलाई पेस्टर गर्नुहोस् र सम्बन्ध जोखिममा राख्नुहोस्।
मेरो राम्रो साथीले उद्यम बिक्री गर्छ मलाई भन्दछ कि ऊसँग तीनवटा हड्तालको नियम छ। उसले कल गर्नेछ वा एक सम्भावनालाई भेट्नेछ, एक आवश्यकताको पहिचान गर्दछ, र समाधान प्रस्ताव गर्दछ। त्यसोभए उसले "व्यक्तिगत नम्बरमा" पुग्न तीनवटा व्यक्तिगत टचहरू बनाउँदछ। वा सम्झौता बन्द गर्नुहोस्।
यदि यो बन्द भएन भने, उहाँ उनीहरूलाई बताउँनुहुन्छ कि उहाँ अगाडि हुनुहुन्छ र तिनीहरूले उहाँलाई कल गर्न सक्दछन् यदि वा जब त्यहाँ आवश्यक छ। ऊ अन्ततः फर्कनेछ र फलो-अप गर्नेछ, तर यदि तिनीहरू केहि बैठकहरू भित्र बन्द हुने छैनन्, तिनीहरू व्यापार गर्न तयार छैनन् ... आज.
यदि तपाईंलाई अहिले नै व्यवसायको आवश्यकता छ भने, तपाईंले अहिल्यै कल गर्नु आवश्यक छ।